Shanta Akhriste ee ugu fiican PDF-ka ee Android-ka Ah Ayaa Laga Heli Karaa Hada | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Tafatirka PDF, Tababarada
Ku dhowaad maalin kasta waxaan la kulannaa faylal qaab PDF ah. Waa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan adduunka. Waxaan u dirnaa boostada ama helnaa. Sidaa darteed, waa muhiim in taleefankeena Android wuxuu kaloo leeyahay akhristaha PDF, maadaama sidaan oo kale aan u aqrin karno dukumiintiyadan markasta. Nasiib wanaagse, xulashadu waa mid aad u ballaaran.
Ilaa hada waxaan ka helnaa akhristayaal badan oo nuucaan ah oo diyaar u ah Android. Waxa ugu fiican ayaa ah inay jiraan cayn kasta. Marka waxaan haysannaa ikhtiyaarro noo oggolaanaya inaan si fudud u furno noocyada feylasha, halka ay jiraan kuwo kale oo noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay a Tifatiraha PDF ee Android, khadadka aan hada ka tagnay waxaad ku baran doontaa sida loo saxo dukumintiga noocan ah
Waxay kuxirantahay isticmaalka dukumintiga noocan ah, waxaa jiri kara ikhtiyaar adiga kugu habboon.. Kadib waxaan kuu dhaafi doonaa xulashada aqristayaasha ugu fiican PDF ee aan maanta ka heli karno aaladaha Android. Kuwee ku soo dhex dhuuntay liiska?
3 Xafiiska WPS
4 Akhristaha Google PDF
Waxaan ku bilaabaynaa liiska xulashada ugu fiican ee dhammaanteen la yaqaan. Maaddaama ay tahay akhristaha PDF-ka intiisa badan ku rakibeen kombuyuutarkooda. Waxaan sidoo kale helnaa codsi loogu talagalay Android oo u shaqeeya isla barnaamijkii asalka ahaa. Ikhtiyaar wanaagsan oo loo akhriyo noocyada faylasha, in kasta oo waliba la buuxiyo foomam ama loo dhoofiyo qaabab kale oo faylal ah. Waxay na siisaa noocyo kala duwan oo xulashooyin ah.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. In kastoo gudaha aan ku leenahay wax iibsasho si aan ugu helno howlo dheeri ah oo dheeri ah. Waxay kuxirantahay isticmaalka aad sameyn doontid, waxaa macquul ah inay kaa magdhabi doonto inaad bixiso.
Adobe Acrobat Reader loogu talagalay PDF
Akhriste PDF kale oo caan ah oo ka mid ah dadka isticmaala taleefanka Android. Waxay sidoo kale u taagan tahay inay tahay ikhtiyaar la isku halleyn karo oo bixiya waxqabad wanaagsan. Waxaan helnaa ikhtiyaar bilaash ah iyo mid aad ku bixinayso. Qaabka bilaashka ah waxaan si fudud ugu furi karnaa dukumintiyadaan oo aan u aqrin karnaa. Laakiin haddii aan bixinno waxaan haysannaa xulashooyin badan oo tafatir ah oo xitaa wuxuu noo oggolaanayaa inaan saxeexno.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. In kasta oo aan wax ka iibsanno gudaha, si aan ugu helno shaqooyinkan dheeriga ah sidii aan horayba u soo sheegnay.
Seddexaad, waxaan helnaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu dhameystiran. Maaddaama aysan ahayn oo keliya akhristaha PDF, laakiin feyl keliya ayaan ku haysannaa xafiis xafiis oo dhammaystiran. Waxyaabo aad noo anfacaya, maadaama aan qaban karno hawlo faro badan adigoon kala soo dagin codsiyo kala duwan. Wax ka dhigaya mid raaxo leh, marka lagu daro yareynta booska lagu isticmaalo taleefanka.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. In kasta oo aan wax ka iibsanno gudaha.
Xafiiska WPS-PDF, Erey, Excel, PPT
Akhristaha Google PDF
Google waxay leedahay aqriste PDF u gaar ah, taasi hubaal in ka badan inta qofku ogyahay. Waa ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo, gaar ahaan tan iyo markii ay si fiican ula falgasho adeegyada kale ee Google ee casriga ah. In kasta oo laga yaabo inaay ina siinaynin hawlo badan sida tusaale ahaan Adobe oo kale. Laakiin waa ikhtiyaar wanaagsan in la akhriyo dukumintiyada noocan ah oo samee xoogaa isbeddello ah. Maxaa intaa ka badan, waa wax aad u fudud.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Intaa waxaa dheer, gudaha kama helno wax iibsi ama xayeysiis nooc kasta ha ahaadee.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ee isticmaalayaasha taleefannada Android, maaddaama ay soo dejintu ka badan tahay shan milyan maanta. Intaa waxaa u dheer in si guud loo qiimeeyo. Waxay u taagan tahay inay tahay ikhtiyaar aad u dhameystiran iyo tan sidoo kale si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa. Marka wakhti kasta oo yar oo aad hesho Hawlo dheeraad ah. Waa suurtogal inay tahay tan ugu fiican, si joogto ah u soo fiicnaata. Taas oo ina siinaysa fursado badan oo dheeri ah.
U soo degsashada akhristaha PDF-ga ah ee 'Android' waa bilaash. Intaas waxaa sii dheer, gudaha gudaheeda wax iibsi iyo xayeysiis midna ma leh. Xaqiiqdii, waxay ku xigtaa Google midka kaliya ee gebi ahaanba bilaash ah. In kasta oo tani ay tahay ikhtiyaar aad u dhammaystiran oo dhammaystiran oo waliba noo oggolaaneysa inaan wax ka bedelno.
Xodo PDF akhristaha iyo tafatiraha
Developer: Hal qayb oo ka mid ah Xodo Technologies Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Tafatirka PDF » Akhristayaasha ugu wanaagsan ee PDF ee loogu talagalay Android
Facebook kama saari doono warbaahinta darbiga dadka isticmaala